သံလွင်: နိုင်ငံတိုင်း၊ လူမျိုးတိုင်း၊ လူသားတိုင်းတွင် ပေတံကိုယ်စီ ရှိကြသည်……
ဤနေရာတွင် ကျေးလက်နေ ဘင်္ဂါလီတို့၏ နေထိုင်မှု ပုံစံကို အနည်းငယ် ရှင်းပြလိုပေသည်….. ၎င်းတို့၏ အိမ်အများစုသည် ရွှံ့ဈေးများဖြင့် ဂူပုံသဏ္ဍန် ဆောက်လုပ်ထားခြင်း ဖြစ်လေသည်….. ဝင်ပေါက်နှင့် ထွက်ပေါက် နှစ်ပေါက်သာ ပါဝင်၍ ပြတင်းပေါက်ရှိခဲလှသည်….. ဒေသတွင်း ဆင်းရဲကြပ်တည်းမှုအရ မိသားစုတစ်ခုမှအမျိုးသမီးတစ်ဦးအိမ်ထောင်ကျသည်နှင့်၎င်းအမျိုးသမီး၏ညီမ၊အစ်မအချို့မှာအိမ်ထောင်ကျ သူနှင့် လိုက်ပါနေရလေ့ရှိသည်…. သို့ဖြစ်သည့်အတွက် သတို့သားမှာကား ထီပေါက်ပေတော့သည်…. ည ဘက်မှောင်နှင့်မဲမဲ အဆိုပါ ဂူပုံသဏ္ဍန်အိမ်ထဲတွင် တွေ့သည့်မိန်းမ ၎င်း မိန်းမသာ ဖြစ်ချေတော့သည်….. ဘာသာတရားအားလွဲမှားစွာသွန်သင်မှုအရလည်း လိင်မှုဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုအားဆန့်ကျင်မိလျင် အပြစ် ကြီးလေးသည်ဟု ခံယူကြသဖြင့် ငြိမ်သက်စွာ နေရပေသည်…….
ထိုဒေသ၏ စကားပုံတစ်ခုမှာကား ဘင်္ဂါလီတို့ အလကားမထားသည့် လ နှစ်ခုရှိသည်ဟု ဆိုရိုးစကား ရှိပေသည်…… ထိုအရာများကား လယ် နှင့် ×ီး တို့ပင် ဖြစ်သည်ဟု ဆိုကြလေသည်……. ဆင်းရဲ လွန်းသဖြင့် လယ်မြေအား အအားမထားပဲ တစ်သီးမဟုတ် တစ်သီးအား စိုက်ပျိုးနေကြပေသည်…… ထို့အတူပင် ဆင်းရဲလွန်းသောကြောင့် အခြားတစ်ပါးသော အပန်းဖြေစရာ မရှိသည့်အတွက် မိန်းမနှင့် သာနှစ်ပါးသွားနေရာမှ ကလေးတစွတ်စွတ်မွေးခြင်းသည်လည်း အကြောင်းခြင်းရာ တစ်ရပ် ဖြစ်ပေ သည်…..ထိုမှတစ်ဆင့် ကိုယ်ဝန်ရှိကာမွေးဖွားလာသည့် ကလေးငယ်များကား နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများ ၏ အထူးစောင့်လျှောက်ခံဘဝနှင့် ကြီးပြင်းလာရပေတော့သည်…… မြို့များရှိ ငွေကြေး ချမ်းသာသူများကား အဆိုပါ တောဒေသရှိ ကလေးငယ်များအား ခေါ်ယူ၍ မိမိအိမ်တွင် လက်တိုလက်တောင်း ခိုင်းစေရင်း အတန်းပညာ အထိုက်အလျောက် သင်ကြားပေးကြပေသည်….. ဤသည်ကား ဘင်္ဂါလီတို့၏ နေထိုင်မှု ပုံသဏ္ဍန်ပင်…..
၎င်းလူမျိုးများသည် ထူးခြားချက် တစ်ရပ်အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်တွင် သစ္စာခံနိုင်ခြင်း အလျဉ်းမရှိသ ကဲ့သို့ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အလံတော်အားလည်း အလေးမပြုနိုင်ကြပေ….. ၎င်းတို့ကိုယ် ၎င်းတို့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် လူမျိုးအဖြစ်သာမှတ်ထင်နေကြသည်…..တစ်နည်းအားဖြင့်မူမြန်မာနိုင်ငံအတွင်း တရားမဝင်ဝင်ရောက် နေ ထိုင်နေကြသော်လည်း မှီတင်းနေထိုင်သည့် နိုင်ငံအပေါ်တွင် သစ္စာစောင့်သိနိုင်ခြင်း အလျဉ်းမရှိကြချေ….. ထို့အတူပင် မွေးဖွားလာသည့် မြောက်များစွာသော မျိုးဆက်များကားရခိုင်ပြည်နယ်အား လူဦးရေ အသာဖြင့် သိမ်းပိုက်နိုင်ရန် အားထုတ်သကဲ့သို့ပင်တည်း…… သို့ဖြစ်သည့်အတွက် “ နိုင်ငံသား မဟုတ်သော၊ နိုင်ငံအပေါ် သစ္စာမစောင့်သိနိုင်သော ဘင်္ဂါလီများ ” အပေါ် ကလေးမွေးဖွားနှုံး ကန့်သတ်ခြင်းမှာ မိမိနိုင်ငံ၏ အကျိုးအနေဖြင့် လုပ်သင့်သော ဥပဒေတစ်ရပ် ဖြစ်ပေသည်…..
သို့ရာတွင်အဆိုပါဥပဒေမှာချမ်းသာသူများအတွက်စာရွက်ပေါ်တွင်သာရှိနေခြင်း၊ ဝေးလံခေါင်းပါးသော နေရာ များသို့အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိခြင်းများကိုလည်းထိရောက်စွာကိုင်တွယ်သင့်ပေသည်……ထို့ကြောင့် ဒေါ်စု ၏စကားအား ဆန္ဒပြသူများအနေဖြင့် ဒေါ်စုအား ဆန့်ကျင်ဆန္ဒဖော်ထုတ်မည့်အစား ဖြစ်ရပ်၏ အကြောင်းခြင်းရာပေါ် မူတည်၍ ဆန္ဒပြသင့်ပေသည်……. မိမိအမြင်အရမူ ဆန္ဒပြဖော်ထုတ်သူများသည် အဆိုပါ ဥပဒေကို ထောက်ခံခြင်းနှင့် မည်သည့်အတွက်ကြောင့် ထောက်ခံခြင်းကို ပိုမိုအလေးထား၍ ဆန္ဒဖော်ထုတ်သင့်ပေသည်…… ဒေါ်စုမှလည်း၎င်းအပေါ် မကျေနပ်လျင် တရားဥပဒေနှင့်အညီ ဆန္ဒဖော်ထုတ်ရန်လည်း လက်ပံတောင်း ကိစ္စမှပင် ပြောဆိုထားခဲ့ပြီး ဖြစ်သဖြင့် ဤကိစ္စနှင့် ပါတ်သက်၍ ဆန္ဒသဘောထား ထုတ်ဖော်သူများသည် ဒေါ်စုအပေါ် ဆန့်ကျင် ဆန္ဒပြမည့်အစား မိမိတို့၏ အဓိက သဘောထား ရည်ရွယ်ချက်ကို ထုတ်ဖော်သင့်ပေသည်……
ထိုသို့ ထုတ်ဖော်ရာတွင် ကလေးမွေးဖွားနှုန်းကန့်သတ်ခြင်းအား ထောက်ခံခြင်းနှင့်အတူ၊ ၎င်းဥပဒေ အကျိုးသက်ရောက်မှု ထိရောက်စေရန် တိုက်တွန်းခြင်းကိုလည်း တစ်ပါတည်း ပြုသင့်ပေသည်…… ကလေးမွေးဖွားနှုန်း ကန့်သတ်ခြင်းကဲ့သို့ အရေးပါသည့် ဘင်္ဂါလီ ဝှိုက်ကဒ် ကိုင်ဆောင်သူများ၏ ၂၀၁၀ တွင် ဆန္ဒမဲ့ ပေးခဲ့သကဲ့သို့ ၂၀၁၅ တွင် ဖြစ်မလာစေရန်လည်း ဆန္ဒဖော်ထုတ်သင့်ပေသည်….. ထိုသို့ ဆန္ဒဖော်ထုတ်ရာတွင် မိမိတို့၏ ဖြစ်စေချင်သည့် အကြောင်းခြင်းရာများသာမက နိုင်ငံ့အကျိုးကို လိုလားသည့် အတိုက်အခံ ပါတီများလည်း နိုင်ငံ့အပေါ်တွင် သစ္စာစောင့်သိသင့်သည်ဟု တိုက်တွန်း၍ ဆန္ဒဖော်ထုတ်သင့်ပေသည်…..
အဆိုပါ ကလေးမွေးဖွားမှုနှုန်းဥပဒေနှင့် အပေါ်တွင် ဒေါ်စု၏ အငြင်းပွားဖွယ် စကားနှင့် ပါတ်သက်၍ မူရင်း အသံဖိုင်အား နားထောင်လိုက်ရပေသည်…… အဆိုပါ အသံဖိုင်တွင် ဒေါ်စုအနေဖြင့် ဒေသန္တရအမိန့် ထုတ်လိုက်ခြင်းကိုသိရှိခြင်းမရှိသော်လည်းလူ့အခွင့်အရေးနှင့်မညီဟုမှတ်ချက်ပေးခဲ့ပေသည်….. နိုင်ငံတကာ တွင် ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချပြီးလျင် မည်သည့်အခြေအနေကိုမဆို ရင်ဆိုင်သွားလေ့ရှိသည့် Iron Lady အဖြစ် နာမည်ကျော်သော ဒေါ်စု၏ အဆိုပါ မှတ်ချက်သည် အဆိုပါ ဥပဒေ ထွက်ရှိသည်ဖြစ်စေ၊ မထွက်ရှိ သည်ဖြစ်စေ တစ်သဘောတည်းပင်တည်းဟု မိမိအနေဖြင့် ယုံကြည်မိပေသည်…..
မိမိ အမြင်အရမူ ဒေါ်စုသည် အဆိုပါ မေးခွန်း၏ အဖြေအား နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးစံနှုန်းနှင့် တိုင်းတာ၍ ဖြေဆိုလိုက်သည်ဟု မြင်မိပေသည်…. သို့ရာတွင် တစ်ချက်ထောက်ပြလိုသည်မှာ ဒေါ်စုသည် ကမ္ဘာ့ဒီမိုကရေစီအိုင်ကွန်မဟုတ်ပဲမြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအိုင်ကွန်ဖြစ်ပေသည်…..သို့ဖြစ်သည့်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံ ၏အရေးနှင့် ပတ်သက်လျှင် မိမိနိုင်ငံ၏အခြေအနေပေါ်မူတည်၍သုံးသပ်ရန်လိုပေသည်….. စာအုပ်ပေါ် တွင်သာရှိ၍ မည်သည့်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်မျှ ၎င်းတို့နိုင်ငံ၏ အကျိုးစီးပွား အပျက်စီးခံပြီး လိုက်နာလေ့ မရှိသည့် ပေတံများနှင့် သုံးသပ်ရန် လိုအပ်မည်မဟုတ်ဟု မြင်မိပေသည်…..
နိုင်ငံတိုင်းသည် လူ့အခွင့်အရေးကို အခြေအနေ အတိုင်းတအာတစ်ခုအထိသာ လိုက်နာလေ့ရှိပြီး မိမိနိုင်ငံ ၏အကျိုးစီးပွား(National Interest) နှင့် ပါတ်သက်လျင် လူ့အခွင့်အရေးမှာ နောက်သို့ ရောက်သွားလေ့ ရှိသည်ကိုသတိချပ်သင့်ပေသည်…..ဤနေရာတွင် ဆော်ဒီအာရီဗျရှိ နိုင်ငံသားမဖြစ်သေးသော၊ နိုင်ငံသားဖြစ် ခွင့်အားနှစ် ၂၀ ကျော် စောင့်ဆိုင်းနေရသော ဘင်္ဂါလီလူမျိုးများ နေထိုင်မှုဘဝကို တစ်ချက် ဖော်ပြလိုပေ သည်……. မည်မျှပင် ဘာသာတူစေကာမူ ဆော်ဒီနိုင်ငံသည် နိုင်ငံသားမဖြစ်သေးသည့် ဘင်္ဂါလီ လူမျိုးများ ၏ ကလေးငယ်များအား အစိုးရကျောင်းများတွင် စာသင်ကြားခွင့် မပြုချေ၊ ဆေးကုသမှု ဆိုင်ရာတွင်လည်း ကန့်သတ်ထားသည်ကို လေ့လာသိရှိနိုင်ပေသည်…..
သို့ဖြစ်သည့်အတွက် အတိုက်အခံများအနေဖြင့် မိမိနိုင်ငံ၏အရေးအား သုံးသပ်ရာတွင် အခြားနိုင်ငံ များအား နမူနာယူ၍ အရာရာအား စာအုပ်ပေါ်တွင်ရှိ၍ လက်ခံကျင့်သုံးမှုနည်းသော စံနှုန်းများဖြင့် တိုင်း တာခြင်း အစား National Interest အပေါ်တွင်သာ အခြေခံ၍ သုံးသပ်သင့်ပေသည်….. ထို့အတူပင် ထင်ရှားကျော်ကြားသည့် ခေါင်းဆောင်များ၏ နှုတ်ထွက်စကားအပေါ် မကျေနပ်၍ ဆန္ဒပြမည့်သူများ အနေဖြင့်လည်း နေ့စားယူ၍ ဆန္ဒပြနေသူများကဲ့သို့ မဖြစ်စေရန် Root Causes ကိုအခြေခံထား၍ မိမိ တို့ ဖြစ်စေချင်သည့် ဆန္ဒကိုသာ အဓိက ဖော်ထုတ်သင့်သည်ဟု တိုက်တွန်းလိုပေသည်…..
ထင်ရှားသည့်နိုင်င်ငံရေးဗိသုကာတစ်ယောက်ဖြစ်သည့်H.J.Morgenthauမှလည်း နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးနှင့် ပါတ်သက်၍ any foreign policy which operates under the standard of the national interest ဟု ဆိုထားပေသည်..... သို့ဖြစ်သည့်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်တွင် သစ္စာမစောင့်သိနိုင်သည့်၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အလံတော်အား အလေးမပြုနိုင်သည့် ဘင်္ဂါလီများနှင့် ပါတ်သက်၍ မိမိတို့အနေဖြင့် ပြတ်ပြတ်သားသား ရှိသင့်ပေသည်….. နိုင်ငံတိုင်း၊ ခေါင်းဆောင်တိုင်း၊ လူသားတိုင်းတွင် ပေတံရှိကြပေသည်…. သို့ရာတွင် မိမိတွင်ရှိသည့် ပေတံသည် လွဲမှားနေသော အံမဝင်သော၊ လက်တွေ့မကျသော ပေတံမဖြစ်စေရန်မှာ မိမိ ဦးနှောက်နှင့်သာ ဆိုင်သည်ကို သတိပြုသင့်ပေသည်ဟု နှိုးဆော်လိုက်ရပါ၏…..
at 6/03/2013 02:00:00 PM